Vondron-parmasia sy vondrona fivarotam-panafody - Easy Multi Display - signage dizitaly
Matoky antsika koa ny vondrona fivarotam-panafody!
"Ny fiasan'ny drafitra Easy Easy Display dia mamela ahy handamina ny fampisehoana mialoha!"
Ny farmasia Errobi dia fivarotam-panafody any amin'ny faritr'i Basque, any atsimo andrefan'ny Frantsa. Ity fivarotam-panafody ity dia manome drafitra tsara mandritra ny taona ary manome anao torohevitra voahaingo manokana.
Trano fivarotam-panafody Errobi
Ny talen'ny vondrona dia naniry nandritra ny tontolo andro hanasongadinana ny tolotra tsara indrindra nataony, izy koa naniry ny hampiasa rindrambaiko famantarana nomerika mora mamela azy handamina ny seho alohany.
Ho fanampin'izany, azony atao koa ny manova ny fampiratiana azy amin'ny alàlan'ny solosaina hafa na avy amin'ny telefaoniny, raha ny tena izy, amin'ny Google Slides, afaka manova ny sariny izy raha tsy mampiasa Easy Multi Display!
Ity fivarotam-panafody ity dia manana mpanara-maso 3, ny voalohany dia eo am-baravarana, ity monitor ity dia ampiasaina mba hampisehoana mivantana ny toetr'andro eo an-toerana, ny monitor faharoa dia eo afovoan'ny fivarotam-panafody ary ampiasaina hanasongadinana ny fifanarahana tsara indrindra, farany, ny ny farany dia eo ambonin'ny kaontera ary manampy ireo mpivarotra fanafody hampianatra ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny horonan-tsary manabe.
Ny tena fanamboaran'ity fivarotam-panafody ity dia monitor 3, solosaina "gaming" 1, tariby 3 "HDMI" ary kinova iraisan'ny Easy Multi Display. Mahatratra 1 € eo ho eo izao fikirakirana izao.